हरेक मान्छे सफल हुन चाहन्छ, हेर्नुहोस् है चाहन्छ मात्र, तर त्यसको लागि त्याग (सम्बन्धित क्षेत्रमा परिश्रम) गर्न चाहँदैन | Daily News Pokhara हरेक मान्छे सफल हुन चाहन्छ, हेर्नुहोस् है चाहन्छ मात्र, तर त्यसको लागि त्याग (सम्बन्धित क्षेत्रमा परिश्रम) गर्न चाहँदैन – Daily News Pokhara
Home Business हरेक मान्छे सफल हुन चाहन्छ, हेर्नुहोस् है चाहन्छ मात्र, तर त्यसको लागि त्याग (सम्बन्धित क्षेत्रमा परिश्रम) गर्न चाहँदैन
हरेक मान्छे सफल हुन चाहन्छ, हेर्नुहोस् है चाहन्छ मात्र, तर त्यसको लागि त्याग (सम्बन्धित क्षेत्रमा परिश्रम) गर्न चाहँदैन
Sep 15, 2017, 23:26 pm0
बिगत केहि बर्ष देखि मोटिभेसनल ट्रेनिङ्ग दिदै आउनु भएका युवा ट्रेनर, स्पिकर, मोट्टीभेटर धेरै नामले चिन्न सकिन्छ उहालाई उहा हुनुहुन्छ सन्तोष लामा । डेली न्युज पोखरा संग गरेको कुराकानी
१) हाल के मा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
व्यस्त त म प्राय ट्रेनिङ्ग प्रोग्रामहरुमै व्यस्त रहन्छु विभिन्न ट्रेनिङ्ग प्रोग्रामहरु मार्फत र अहिले म भर्खरै एउटा हाइ इम्प्याक्ट मोटिभेसनल सेमिनार गरेँ, र अहिले अरु जीवन विकास सम्बन्धी नयाँ कोर्षको तयारीमा छु, जसले व्यक्तिको चौतर्फी विकासमा पूरा सहयोग गर्नेछ ।
२) यस्तो खालको मोटिभेसनल ट्रेनिङ्ग प्रोगा्रमहरुको फाइदाहरु के–के हुन्छ ?
मोटिभेसनल ट्रेनिङ्ग प्रोग्रामहरुको फाइदाहरु धेरै छन् । मोटिभेसन भनेको बिजुली हो , जसरी एउटा ब्ल्वलाई जलाएर चारैतिर उज्यालो पारिदिन्छ, त्ष्स्तै मानिसको जीवन पनि एउटा बल्व जस्तै हो, जसलाई मोटिभेसनले उज्यालो पार्न मद्दत गर्छ । मानिसको उतार चढाव जीवनमा कहिँ न कतै मोटिभेसनको जरुरत गर्दछ । यस्ता मोटिभेसन ट्रेनिङ्ग प्रोगा्रामले मानिसको पहिलो कुरो त आत्म विश्वास जगाउँने, आफ्नो क्ष्मताको उजागर गर्न सघाउने, आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न भरपुर प्रेरणा दिने काम गर्दछ । समग्रमा भन्नुपर्दा यस्ता मोटिभेसनल ट्रेनिङ्ग प्रोग्रामले व्यक्तिको जीवन समृद्ध बनाउन भरपुर मद्दत गर्दछ ।अफ म के भन्दछु भने, आजको समयमा सामान्य जीवन यापन गर्ने व्यक्ति देखि राजनितीक व्यक्तित्व सम्मका हरेक व्यक्तिलाई व्यक्तित्व र नेतृत्व विकास सम्बन्धी यस्ता कार्यक्रमहरुको सख्त आवश्यक छ । पश्चिमेली देशहरुमा त यस्ता खाले कार्यक्रमहरुको त कल्चर नै विकास भईसकेको छ । अझ एउटा अनुसन्धानबाट के पनि आएको छ भने आज अमेरिका लगायत अन्य विकसित देशहरु सफल हुनुको मुख्य कारण केहि प्रतिशत यस्ता मोटिभेसनल प्रोग्रामका पनि मुख्य भुमिका रहेको प्रमाण भईसकेको छ ।
३) तपाईको संस्था रोडम्याप सक्सेस र तपाईले दिनु हुने ट्रेनिङ प्रोग्रामहरु के–को हुन्, जुन व्यक्तिको प्रत्यक्ष जिवनमा लाभ हुने ?
हाम्रो संस्था रोडम्याप सक्सेसले उपलब्ध गराउने ट्रेनिङ प्रोग्रामहरु जस्तै ः– माइन्ड पावर, गोल सेटिङ, समय व्यवस्थापन, तनाव व्यवस्थापन, पब्लिक स्पिकिङ्ग (भाषण कला), सुपर मेमोरी, करियर व्यवस्थापन लगायत अन्य प्रोग्रामहरु छन् जसले व्यक्तिको प्रत्यक्ष जिवनमा सवल बनाउने कुराहरु छन् ।
४) हजूरले भाषण कला पनि सिकाउनु हुन्छ भन्नु भयो , खासमा यसका फाइदाहरु र यो किन महत्व छ ?
भाषण कला अर्थात् पब्लिक सिपकिङका फाइदाहरु धेरै छन् । आजको प्रतिस्पर्धी समयमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ, एउटा नेपाली मै भनाई छ नि ः “बोल्नेको पिठो विक्छ, नबोल्नेको चामल पनि विक्दैन । ” त्यसैले अहिले राम्रोसँग बोल्न सक्ने अर्थात कुनै पनि कुरालाई सहि अर्थकासाथ भन्न सक्ने व्यक्ति नै कुनै पनि पेशा व्यवसायमा आफ्नो बेग्लै पहिचान बनाइहाल्न सक्छ र उसले त्यसमा सफलता पनि प्राप्त गर्न सक्छ । इतिहासलाइ नै हेरौँ भलै यो नकारात्मक नै किन नहोस् हिटलरले आफ्नो बोली कै पकडका कारणले त्यत्रा सैनिक शासन चलाए र ठूलो जमातमा यहुदीहरु माथि विध्वंश गरे । अर्को कुरा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन त विश्वमै बोलीका प्रभावी व्यक्तित्व मानिन्छन् (भाषणमा) । तयस्तै अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओवामा, भारतका नरेनद्र मोदी र नेपालकै सन्दर्भमा पनि भन्ने हो भने राजनेताहरुको भिडमा प्रचण्डलाई पनि लिने गरिन्छ । त्यसैले हामीले ३ दिने प्रयोगात्मक कोर्ष जुन हामी गराउँछौा जुन यस कुरामा महतव राख्छ कि व्यक्तिले के बोल्ने, कहाँ, कसरी र अरुको मनोभावनाअनुरुप बोल्ने भन्ने कुरामा जोड दिन्छौं ।
५) आजको समयमा हरेक मान्छ सफल हुन चाहन्छ तै पनि ऊ सफल भइरहेको हुँदैन यस्को कारण ?
हरेक मान्छे सफल हुन चाहन्छ, हेर्नुहोस् है चाहन्छ मात्र तर त्यसको लागि त्याग (सम्बन्धित क्षेत्रको परिश्रम) गर्न चाहँदैन, हुनत असफल हुनुको धेरै कारणहरु हुन्छन् । आज हामी आफ्नै लागि गर्दैनौं किनकी थाहा छ सवै कुरा यो गर्दा हुनछ, यो गर्दा हुँदैन, तर पनि गर्दैनौं । किनकी यहाँ एउटा मनोविज्ञानले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ त्यो हो हाम्रो वानी । श्रीमद भागवत गीतामा वानीका तीन प्रकृतिका वारेमा उल्लेख गरिएको छ । सतगुणी, रजोगुणी र तमोगुणी प्राय कैयौं व्यक्तिहरु तमोगुणीमा लिप्त छन् । जस्तो कुनै कर्मलाई वाहनामा टार्नु लक्ष्य अनुरुप कर्म नगर्नु सधै मोजमस्ती र रमाइलोमा दिन विताउनु, मद्यपान गर्नु, लगाएत यी सव आफूलाई असफलतातिर धकेल्नु हो । वैज्ञानिकहरु भन्छन् यदि कुनै पनि पेशा व्यवसायमा, कुनै पेशा पहिचान गरेर त्यसमा ५ बर्ष निरन्तर परिश्रमकासाथ लाग्ने हो भने सफलता लाग्ने कुरा बताउँछन् । अरु अर्को रोचक कुरा यदि आफ्नो मन परेको पेशामा १०,००० घण्टा समय खर्चने हो भने सफलता नहुने कुरो नै हुँदैन । अव भन्नुस् के तपाई आफ्नो लक्ष्य अनुरुप १०,००० घण्टा समय दिन सक्ने संकल्प गर्न सक्नुहुन्छ ? यदि सक्नु हुन्छ भने दुनियाको कोही माइकालालले पनि तपाईलाई सफल हुनबाट रोक्न सक्दैन ।
६) तपाईको संस्थाले र तपाईले दिनुहुने ट्रेनिङ्ग प्रोग्रामबाट व्यक्तिको जीवनमा परिवर्तन ल्याउँछ ?
विलकुल ल्याउँछ १००% तर व्यक्तिले चाहनु प¥यो । जसरी श्रीमद भागवत गीतामा कृष्णले अर्जुनलाई जीवन सम्बन्धि सम्पूर्ण ज्ञान र कुरुक्षेत्रको लडाई गर्न जुन विशेष ज्ञान दिईयो, त्यो अर्जुनको जिज्ञासाको विषय थियो । अन्त्यमा अर्जुनले कुरुक्षेत्रको लडाई पनि जिते । त्यसैले कुनै पनि व्यक्तिले चाहनानुरुप कर्म गर्नुपर्दछ । जुन सफल हुनको निम्ति हाम्रो संस्थाले यी जीवन विकास सम्बन्धी ट्रेनिङ्ग उपलब्ध गराउने र गराईरहेका छौँ ।
७) त्यसो भए, नेपालमा र नेपाली युवा वर्गमा यस्ता मोटिभेसनल ट्रेनिङ्ग कत्तिको महत्वपूर्ण छ ?
म त भन्छु १००% महत्वपूर्ण छ । नेपालमै मात्र नभएर विश्वमै यस्ता खाले कार्यक्रमहरुको महत्वपूर्ण छ । हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशहरुमा त झन अति नै महत्वपूर्ण र आवश्यक छ । विकसित देशहरुमा यस्ता खाले कार्यक्रमहरुको कल्चर नै बसिसक्यो तर हाम्रो जस्तो देशमा अलि चेतना कम छ । आज हरेक युवा जमातमा तनाव छ, डिप्रेसन छ, किनकी आफ्नो लक्ष्य र क्षमता पहिचान गर्न नसकेर, किनकी हाम्रो शिक्षा प्रणाली नै यस्तै छ । जुन त्यस्तै सिकाइयो अनि त्यही शिक्षालाई १००% मानेर जीवनमा लागू गरियो परिणाम अन्तमा असफल, तनाव, डिप्रेसन, दुःखीको सिकारमा ग्रसित भइयो । अमेरिकाको हार्वड विश्वविद्यालयले गरेको अनुसन्धानुसार कुनै पेशा व्यवसायमा सफल हुनको लागि ८५% भूमिका उसको दृष्टिकोण ९ब्ततष्तगमभ० ले निर्धारण गर्छ जवकी १५% मात्र उसको शिक्षा ९भ्मगअबतष्यल, प्लयधभिमनभ, क्ष्लतभििष्नभलअभ० ले काम गर्छ, भने पछि आज हामी जति शिक्षा लिइरहेको छौ स्कूल कलेजमा जुन १५% मात्र भूमिका खेल्ने काम गर्ने रहेछ हाम्रो जीवनमा । ल आफै बुझ्नुहोस् तपाई । त्यसैले हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा नै केही गडवढी छ । त्यसैले आजको प्रतिस्पर्धी समयमा १५% साथै ८५% भूमिका खेल्ने कुरामा जोड दिन आवश्यक छ, जुन रोडम्याप सक्सेसले केही हदसम्म पाइला अगाडि बढाएको छ ।
८) अन्त्यमा अहिलेको युवावर्गलाई तपाई के भन्न चहानुहुन्छ ?
म एउटा ःयतष्खबतष्यलब िक्उभबपभच भएको नाताले के भन्न चाहान्छु भने पहिलो कुरा आफ्नो जीवनको लक्ष्य पहिचान गर्नुस् अनि दोस्रो त्यो चीजलाई विश्वास गर्नुस् अनि तेश्रो कुरा तयस सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिको संगतमा आउनुहोस् र चौथो प्रयास, प्रयोगमा लाग्नुहोस् । हामीसँग अथाह शक्ति छ, वस चिन्न सकिरहेको छैन । जसरी एउटा मृगले आफ्नै नाभीवाट आएको मिठो वास्ना सुगन्धको चाल पाउँदैन र ऊ चारैतिर भौतारि रहन्छ र तै पनि थाहा पाउँदैन कहाँबाट आइरहेको छ भनेर त्यसरी नै हाम्रो पनि अवस्था त्यही मृगको जस्तै भएको छ । हामीसँग भएको शक्तिलाई चिन्न सकिरहेका छैनौँ जुन वाहिर छैन हामी भित्रै छ सफलताकोद्धार । अमेरिकाको हार्वड विश्वविद्यालयको अनुसन्धान अनुसार (१९६९–१९७९) भएको १० बर्षको दौरानमा त्यस समयताका पास आउट भएका विद्यार्थीहरु को कति सफल भए भनेर हेर्दा ८३% विद्यार्थी सामान्य, १४% अलि सफल र बाँकी ३% चै ८३% र १४% विद्यार्थी भन्दा दशौँ गुणा सफल भएको देखियो यसको कारण पूर्व निर्धारित लक्ष्यानुरुप कार्य गरेको पाइयो । त्यसैले आजै अहिल्यै आफ्नो लक्ष्य ठोकुवा गर्नुहोस् र त्यसै अनुरुप लाग्नुस् । समस्या आयो भनेर चूप नबस्नुस् यो एउटा मौका हो आफूलाई परिवर्तन गर्ने ।
Previous Postलगानी कर्ताले ४० हजार तिर्छन तर बिष्णु माँझीको मुख देख्न पाउदैनन् – भिडियो सहित Next Postध्यान दिनुहोस्, के तपाईंको शरिरबाट पनि आउँछन् यस्ता आवाज ? बेवास्ता नगर्नुहोस्